yemizobo | Umculi u-Oleg Soloviev
Amanani kunye nemizobo
Amanani kunye nemizobo - kusoloko isisombululo ubenomtsalane umhombiso izinto zentengiso, ingaphakathi, kwakunye njengesiseko umsebenzi naliphi na igcisa. Amanani ukuze kufuneka nje kuphela ingxenye lokubhalela: maxa wambi amandla zobuciko abafundi-graphic kufuneka uncedo eyiyo, oya kukwenza nokukwenza kubo okanye ukuguqula umzobo, ukuba intsebenzo esemgangathweni xesha laneleyo, okanye isihloko akubangi iphefumlelwe. I ungakwazi imizobo oda kunye nemizobo kwizinga eliphezulu: Ndisebenza banezimbo, ngezinto ezahlukeneyo, ngoko nkqu umthengi eyona inzima uya kwanela ngentsebenziswano.
design yemizobo ngabakwenzayo yam iquka sketch kwi yekhadibhodi kuphela, iphepha wobugcisa okanye iseti. Ndisebenza nje yemizobo computer, ukuze I okuyalela:
• design pattern ilogo yenkampani;
• tattoo angumfanekiso;
• i umzobo ingaphakathi;
• portrait njl.
Mna ngumzobi anolwazi, abantu, ngubani imihla lugxile iiyure nokuphucula izakhono zabo. Ndiyazi ubuchule kunye nobuchule ngokuzoba ezahlukeneyo, ukusebenza kwi icwecwe graphic kunye nezinto 'zemveli' - ngelaphu, iphepha, njl. Qiniseka, ukuba umsebenzi wam wonibonelela kuzo zonke iintswelo zenu neemfuno, khangela nezamkelekileyo elimnandi. Umzobo okanye okuzotyiweyo ziya ukusombulula zonke imisebenzi yakhe eyabelwe: Ukuba le logo, ke kuya kusebenza le yokwazisa ishishini lakho kunye nokusombulula ezinye iingxaki zoshishino, ukuba ukuyalela umzobo njengesipho - ngokuqinisekileyo uya kumkholisa kunye Ngaphezu sosuku, ngubani prepodneson. Umsebenzi wam ngempumelelo Wajonga elingaphakathi, kunye nemizobo umfundi njalo ziyavuyelwa, njengoko ziyazithobela iimfuno, zamiselwa ukuba ngootitshala.
kwizinga eliphezulu nocikizeko ekwenzeni imisebenzi yawo nawuphi na xaka, ukwenza ukuziqambela, ukudalwa kwemisebenzi kuphela ngokwentando yakho - into leyo eyenza umsebenzi wam izindululo amanye amagcisa nabayili.
Mna ukulungele ukwenza nawuphi na umyalelo! ukubiza, musa ukulibala ukuba:
• Ukuba ufuna akukho graphics computer, ke ekukhetheni iincwadi, leyo ufuna ukubona umsebenzi (cardboard, Isinikezeli, okwakhiwa; picture isiphawuli, ngepensile, ezibayeni gel, inki, njl);
• zonke iimfuno kumzobo, umzekelo, style olufunayo, ukugxila iinkcukacha, njl.
umsebenzi My - oko kusoloko quintessence ka, ngokuncedisana yalo ubuchule, ke imizobo kunye nemizobo - ayikho kuphela uhombiso ingaphakathi, kodwa sisixhobo inzuzo, ukuba uwasebenzise iinjongo zorhwebo!